Ukudibanisa "i-America's Got Talent" Abagwebi
Ukuncintisana kwethenda ye-NBC ye-talent kunye ne-American TV show, iMelika's Got Talent , iye yaboniswa ngabadumi abaninzi abahlukahlukeneyo ukususela ngo-2006, ukusuka kuRegis Philbin ukuya kwi-presenter ye-Tyra Banks. Umboniso unikela abantu emhlabeni jikelele ithuba lokuba benze phambi kwabagwebi ithuba lokuba babonise iitalente zabo baze bafumane iibhaso. Iziphumo zemisebenzi yeemvumi, abadansi, kunye nokunye, zihlanganiselwe ngabagwebi nabaphulaphuli.
I-American's Got Talent inike ithuba loBomi beZakhono zoBomi
Umboniso wenkqutyana yenkqonkqo yenziwe ngumgwebi uSimon Cowell kwaye ngoku unamajaji kuquka i-Spice Intombi yaseMel B, iSpermodel yeProjekthi yeProjekthi ye-Run Run , u-Heidi Klum, u- Deal okanye u-No Deal umphathi we-Howie Mandel, kunye nomgwebi owaziwayo onokuwunqoba, Simon Cowell.
Inkwenkwezi uSharon Osbourne, umboniso womdlalo uPeter Morgan, umculi uBrandy, umculi uDavid Hasselhoff, kunye nomsakazo "bamangalise" uWoward Stern wawagweba phambili ngeemali kwixesha langaphambili lonyaka. Funda kabanzi ngamanye amajaji amasha kunye namadala aseMelika aseGalati yeTalente avela kwi-12-season show ye-hosted over 298 episodes engezantsi.
UHeidi Klum wajoyina i- America's Got Talent ngexesha lokuba enze ixesha lesibhozo ngowokuqala kunye netyala lokugweba abantu abane. I-Klum sele ichithe amaxesha amahlanu kwi-panel panel ye-NBC.
I-Klum iyaziwa ngokuba yimpumelelo yeJamani ye-Topmodel kunye neProject Runway, kwaye idume ngokuziwayo ngokuba ngumsebenzi we-supermodel, i-Victoria's Secret Angel, kunye ne-Emmy Award winner. Njengomzekelo wangaphambili, i-Klum ngumgwebi omhle wefashoni, kwaye ngoku igosa leetalente.
UMelanie Brown, owaziwa nangokuthi nguMel B, utshintshe uSharon Osbourne njengejaji eMelika's Got Talent yexesha lesibhozo.
U-Mel B rose udumo njengelungu le-Spice Girls. Abaninzi babeza kumbona njengowudumo "Olwenkqisayo." UBrown naye usebenza njengejaji kwi -X Factor Australia , ephethe i-Oxygen yesihlandlo sesibini yokuDanisa i-Ass Ass yakho, kwaye wayenobungqina bakhe boqobo kwi-Style Style, uMel B: Ihlabathi elibi .
UBrown wayevele ekhuphisana nexesha elihlanu lokuDansa ngeenkanyezi . Umculi weNgesi ophumeleleyo, umbonisi, kunye nomdlali we-actress uye wadibanisa neebhaliweyo ezifana neNtombi, i-Amber Cafe kunye ne-EMI kulo lonke umsebenzi wakhe womculo.
IJaji likaGood of Talent likaJaji uHeie Mandel wathatha xa uDavid Hasselhoff washiya ngo-2010.
I-Mandel iyaziwa ngokubamba umdlalo wokubonisa umcimbi okanye ukungabi nantoni kunye nendima yakhe njengoDkt. Wayne Fiscus kwidrama yonyango yaseSt . Ukwazisa kwakhona i-Fox flash i-mob ye-reality reality, i- Mobbed .
Umculi waseCanada kunye nomdlali wecala uye wachitha ininzi yakhe yeTV kunye nomsebenzi wefilimu kwiqela leendima eziphathekayo zeempawu kunye neefilimu kubandakanywa no-1984 kwiiGremlins kunye nomnye.
UWoward Stern wajoyina ipaneli yokugweba kwi- America's Got Talent yonyaka wesixhenxe. Ngaphambi koko, i-Stern yayiyaziwa ngokusasazwa ngomsakazo, oye waqala ukususela ngo-1986, kwaye u-"shock jock" womsakazo wobuntu.
Emva kweenyanga ezine, i-Stern ishiya i- AGT. Ekuhambeni kwakhe, evezwe kwixesha lokuphela kwexesha le-10, wachaza iinjongo zakhe zokuqala zokujoyina, ekubeni wayefuna ukunceda abo babenzima kwaye banike iingcebiso.
Ngaphambi kokuba abe yijaji kwi- America's Got Talent , uSharon Osbourne wayenomxholo weentetho zakhe, wabonakala kwi- Celebrity Apprentice, kwaye ubizwa ngokuthi uqalise umboniso wokuqala we-celebrity udumo, i-MTV ye -Osbournes . Ekupheleni konyaka ka-2011, u-Osbourne washiya i- AGT ukumbhikisha u-ABC ukukhwela unyana wakhe uJack kwiinkcenkcesho zenkwenkwezi .
Olongezelelweyo abagwebi abafana no-Piers Morgan, uDavid Hasselhoff noBrithy balethe ngokubanzi kwi-NBC yemidlalo yokubonisa:
U-Piers Morgan wayengumgwebi kwi- America's Got Talent ukusuka ekuqalweni kwayo ngo-2012 xa eshiye ukugxila kwi-CNN yeentetho zeendaba ezibonisa uPier Morgan Tonight .
Umdlali weBaywatch uDavid Hasselhoff wayengumgwebi kwiMelika's Got Talent kwiinyanga ezine zokuqala.
Umculi uBrandy wagweba ixesha lokuqala lokubonisa.
Yemen | Iinkcukacha kunye neMbali
Amazinga ahlukeneyo weTable Tennis Playing